ကိုဗစ် အရှိန်မသေသေးတာမို့ မိတ်ဆွေတွေနဲ့မတွေ့ခင် ဒီမေးခွန်းလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါဦး - Hello Sayarwon
ပြည်တွင်းမှာ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုက မပြီးစီးသေးပါဘူး။ ရက် ၃၀ ကြာ Local Transmission မရှိပဲ ငြိမ်သက်နေခဲ့ရာကနေ ခုချိန်မှာတော့ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်မရှိပဲ ကူးစက်မှုပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုရင် အသစ်တွေရှိထားတဲ့ စစ်တွေက လူနာအမျိုးသမီးဟာ ပြည်ပခရီးသွားရာဇဝင်လည်းမရှိသလို COVID-19 အတည်ပြုလူနာတွေနဲ့လည်း ထိတွေ့ဖူးခြင်းမရှိသူပါတဲ့။
ပုံမှန်အားဖြင့် ၂၈ ရက်အတွင်း Local Transmission ကူးစက်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေလို့ သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း WHO က ဆိုထားပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာတော့ ရက် ၃၀ ပြည့်ပြီးချိန်မှာ Local Transmission လူနာ ထပ်တွေ့တာပါ။
ဆိုတော့စိုးရိမ်ရတဲ့ အနေအထားကို ပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့။ လက်ရှိအချိန်မှာက အပြင်ပြန်ထွက်တာ၊ Mask မတပ်တာတွေ၊ Social Distancing မလုပ်တော့တာတွေနဲ့ ပြန်လည်အသားကျနေကြပြီလို့ ဆိုရမယ့်အချိန်ပါ။
ခုလို Local Transmission လို့ ယူဆရတဲ့ မဖြစ်ခဲ့တာမို့ ဒီလိုနေထိုင်မှုတွေအတိုင်း ဆက်လက်နေထိုင်သွားလာနေကြလို့ အဆင်ပြေပါ့ဦးမလားလို့ တွေးတော့ပူပန်စရာရှိလာနေပါပြီ။
လူငယ်သဘာဝ ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ သွားလာနေထိုင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြစ်ဆိုစရာမရှိပေမယ့် ခုကာလမှာတော့ အပြင်သွားတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဆုံး မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ရှိလာနေပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆွေးနွေးထားတဲ့ မေးခွန်း ၅ ခု ရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်း ၅ ခုကတော့ ကိုယ်အပြင်ကိုသွားမယ်၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ကြဆုံကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အောက်ပါမေးခွန်းတွေ ပြန်မေးကြည့်ကြည့်ပါဦး။
အပြင်ဆိုင်မှာ တွေ့မှာလား? အိမ်မှာ တွေ့မှာလား?
ကိုဗစ်ကာလကြီးဆိုပေမယ့် အပြင်ထွက်ပြီး စားကြသောက်ကြတဲ့ အလေ့အထလေးတွေက ပြန်ရှိနေကြပါပြီ။ ခုလို Local Transmission ပြန်ဖြစ်လာချိန်မှာ အပြင်မှာထွက်ပြီးတွေ့တာက စိတ်ချရရဲ့လား? ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အိမ် ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အိမ်မှာ စုဝေးပြီးတွေ့တာကရော နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာကို သေချာစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် မျက်နှာဖုံးမတပ်ကြသူတွေလည်း များလာနေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူရင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ အချင်းချင်းတွေ့ကြတာမျိုးဆိုရင်တော့ Mask မတပ်ကြတော့ပါဘူး။ အချင်းချင်း စကားပြောဆိုကြရာမှာ Mask ကြီးတပ်ပြီး မပြောချင်ကြတာကလည်း အပြစ်ဆိုစရာ ကိစ္စလို့တော့ ဆိုလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးသူမို့ ရောဂါပိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့တော့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ Mask တပ်ထားကြမှာလားဆိုတာကိုလည်း မတွေ့ခင်မှာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
လူများလေ အန္တရာယ်များလေလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ခုချိန်မှာ လူ ၃၀ အထိ စုဝေးခွင့်ပေးထားပေမယ့် ကိုယ့်အနီးဝန်းကျင်မှာ လူစုလူဝေးရှိနေတာက အန္တရာယ်များတာကိုတော့ လူတိုင်းနားလည်ကြမှာပါ။ WHO ကတော့ ၁၀၀၀ စတုရန်းပေမှာ လူ ၉ ယောက်ဝန်းကျင်ပဲ နေထိုင်ကြဖို့ လမ်းညွှန်ထားတာကို မမေ့ပါနဲ့။
အပြင်ထွက်ပြီး သွားတွေ့ကြပြီဆိုပါစို့။ ဘယ်အချိန်ကနေ ဘယ်အချိန်အထိ သွားတွေ့မှာလဲဆိုတာကို မေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်။ တစ်ကုန်တစ်နေခန်း နေရာတစ်ကာကို လျှောက်သွားနေပြီး မိုးချုပ်မှအိမ်ကိုပြန်လာရင် ကိုယ့်မိသားစုအတွက်လည်း အန္တရာယ်များတယ်မဟုတ်လား။ ဘတ်စ်ကားတိုးဝှေ့စီးပြီးသွားရတဲ့နေရာမျိုးတွေ၊ လူစုလူဝေးများတဲ့ ဈေးဝယ်စင်တာလိုနေရာတွေကို သွားရမယ်ဆိုရင် အချိန်သတ်မှတ်ပြီးသွားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အရေးအကြီးဆုံး မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဆေးဖို့၊ Mask တပ်ဖို့၊ Social Distancing လုပ်ဖို့၊ လူစုလူဝေးကို ရှောင်ဖို့စတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာမှာလားဆိုတာကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော၊ ကိုယ်နဲ့တွေ့မယ့် အသိမိတ်ဆွေတွေကိုပါ မေးခွန်းထုတ်ရပါမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ သွားချင်သလိုသွားပြီး နေချင်သလို နေနေမယ်ဆိုရင် ဘာမဆို ဖြစ်လာနိုင်တာကိုလည်း သိထားရမယ်လေ။
ဒီမေးခွန်းလေး ၅ ခု ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးပြီးချိန်မှာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘယ်လိုတွေ့မလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် မတူညီတဲ့ အဖြေတစ်မျိုးတော့ ရလာမယ်ထင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပြောချင်တာကတော့ ခုချိန်မှာ ရောဂါအကင်းမသေသေးသလို အန္တရာယ်ရှိနေသေးတဲ့ ကာလတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဆိုတာပါပဲ။ မပေါ့သင့်တဲ့အချိန်ပါ။ ကိုဗစ်ဟာ ကြောက်ဖို့ကောင်းနေဆဲရောဂါတစ်ခုအဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဒုက္ခပေးနေဆဲပါလို့။